RASMI: Benfica oo bayaan ka soo saartay haddii uu da’yarkeeda Joao Felix ku biirayo kooxda Atletico Madrid – Gool FM
Xulalka England iyo Scotland oo bar-bardhac ku kala baxay kulan ka tirsanaa koobka EURO 2020… + SAWIRRO
RASMI: Benfica oo bayaan ka soo saartay haddii uu da’yarkeeda Joao Felix ku biirayo kooxda Atletico Madrid
(Benfica) 17 Juunyo 2019. Kooxda kubadda cagta Benfica ayaa bayaan ka soo saartay wararka sheegaya in xiddigeeda Joao Felix uu ku biirayo naadiga Atletico Madrid ee ka dhisan dalka Spain.
Benfica ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku beenisay wararka gelinkii dambe ee maanta soo baxay ee sheegayay in Atletico Madrid ay la saxiixanayso da’yarkeeda Joao Felix oo ay heshiis ku wada gaareen labada kooxood.
Wararka ka soo baxayey Spain oo ay warinaysay Saxaafadda Waddankaasi ayaa sheegayay saacadihii dambe ee maanta in Atletico Madrid ay ku dhawaaqi karto saxiixa 19-sano jirkaan Joao Felix, kaddib markii ay ogolaadeen inay bixiyaan lacagaha lagu burburin karo heshiiskiisa oo dhan 120 milyan oo euro oo u dhiganta 107 milyan oo gini ama 135 miyan oo dollar.
Yeelkeede, kooxda Benfica ayaa warkaas xanta ah qashinka ku dartay, waxaana bayaan ay soo saartay ay shaaca kaga qaaday in weli laacibkan saxiixiisa u furan yahay koox kasta oo diyaar u ah inay bixiso qiimaha lagu burburin karo qandaraaskiisa.
Waxaana kooxda Benfica ay warbixinta ku sheegtay inaysan jirin wax heshiis ah oo ku aaddan saxiixa Joao Felix oo ay la gaareen kooxda reer Spain ee Atletico Madrid, isla markaana warbixinnadaasi ay yihiin kuwo been abuur ah.
Kooxaha Manchester City iyo Manchester United ayaa si xoog leh u xiisaynaya saxiixa da’yarkan Joao Felix.
RASMI: Kooxda kubadda cagta Arsenal oo magacaabatay tababare ku xigeen cusub
Group-ka B ee Koobka Adduunka Dumarka oo lasoo gaba-gabeeyay… + SAWIRRO
HAMBALYO: Inter Milan oo ku guuleysatay horyaalka Serie A!
Rivaldo oo uga digay Real Madrid inay soo ceshato Cristiano Ronaldo
Bruno Fernandes oo rikoor waali ah ka sameeyay Manchester United… isagoo dhaafay Paul Scholes